Yakanakisa TeamViewer Dzimwe nzira dzaunofanira kuedza (2020) - Softwares
TeamViewer iri pakati peyakanakisa kure desktop desktop iyo inokubatsira iwe kuti ubatanidze nemazhinji mashopu ekushandira ari kure. Iye zvino aenda iwo mazuva iwayo kana uchibatanidza kune chero chinhu chiri kure chinoshandiswa chisina kuchengetedzeka uye chinononoka. Iyi software inokutendera iwe kuti uwane iyo komputa kure.
Yayo yakakura maficha uye mashandiro ayo anotendera iwe kuti uwedzere iyo yekure-kutonga mashandiro nekukurumidza Hardware yekugadzirisa mifananidzo. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kudonhedza faira kubva kure kure komputa kune imwe komputa.
Nekudaro, kunyangwe ichikosha, iyi software hombe yekudzosera kumashure ndeyekuti nepo uchivandudza kune iyo nyowani vhezheni, yako system inogona kunonoka, uye yayo yehunyanzvi vhezheni mutengo yakanyanya kukwirira. Ndosaka vazhinji vashandisi vari kutsvaga nzira dzeTeamViewer mazuva ano.
Nei uchida TeamViewer Dzimwe nzira?
Kune vashandisi vatsva, TeamViewer software haisi nyore kugadzirisa, izvo zvinowedzera kuumba yakawanda yekuchengetedza nyaya. Uye kana yako TeamViewer software isina kugadziridzwa nenzira kwayo, ipapo sisitimu yako inogona kukanganiswa nenjodzi. Zvakare, kana iwe uchida kushandisa iyi software kune bhizinesi zvinangwa, iwe uchafanirwa kuburitsa muhombe muhombe kudyara mairi.
Zvakanaka, izvi zvikonzero zvakakwana kutsvaga imwe nzira kune TeamViewer. Saka, pano tapfupisa dzimwe nzira nomwe dzepamusoro dzeTeamViewer, dzinogona kuwana zviri nyore makomputa ari kure.
Kutsvaga Windows 10 Discount Yevadzidzi? Tora kubva kune yedu Blog Chikamu.
TeamViewer Dzimwe nzira (2020) - Wepamusoro 7 Akanyanya
Pano, isu takaongorora huwandu hwese hunomwe hwesoftware mhinduro dzinogona kuve dzakasimba nzira ye TeamViewer. Iyi imwe software inoshanda seyakanakisa ekushandisa manejimendi ekushandisa kune wese mupi webasa. Saka, pasina kutambisa nguva yakawanda, ramba uchiverenga kuti uzive nezve idzi dzimwe nzira.
Iyi ndeimwe yedzakanakisa nzira kune TeamViewer sezvaunogona nekukurumidza uye nekuiwana zvakananga kuburikidza neakanyanya mashandiro masystem, angave mahwendefa, malaptop, mafoni, uye desktops. Nekuwana muoni weHTML, timu yevanhu vanopfuura makumi maviri nemashanu inokwanisa kuwana komputa imwe panguva.
Kunze kwezvo, iyo admin inogona kubvumidza mushandisi nekukurumidza uye kuchinjika nyore. Iyo zvakare inoratidzira zvimwe zvinonakidza maficha ekutsetseka epamhepo misangano senge mameseji kutaurirana, kurekodha, chena bhodhi mashandiro, nezvimwe.Iye munhu anogona kuwana demo kwemazuva gumi nemana; zvisinei, haina kusununguka zvekare. Vashandisi vanotarisirwa kubhadhara kutenderedza 48 & pamwedzi kupa marezinesi kune vashanu vashandisi.
2. Dameware Remote Kwese Kwese
Dameware Remote Kwese kupi imwe inonyanya kukosha kutsiva TeamViewer. Iyi software inopa kure kure desktop desktop kune macOS X, Windows, uye Linux makomputa. Saka, kure mukufunga kwedu, iyi ndiyo yakanakisa kure manejimendi software mhinduro inowanikwa mumusika.Iyo software inoshanda zvinobudirira kune vashandisi veWindows nekuti inobvumidza iyo admin kuwedzera pakarepo vashandisi kudhairekitori ravo rinoshanda uye nekuvapa rubatsiro rwekukurumidza kuti vawane maturusi ekushandisa.
Iyi gore-based software solution inopa nyore kuwana uye kugona kune mushandisi kubva kuSawaS chishandiso. Kunyangwe isiri imwe yemahara nzira kune TeamViewer, inogona ichikushandira iwe. Zvichakadaro, iwe unogona zvakare kumisikidza makomputa ari kure, tora-one-screenshots, uye taurirana nevanopedzisira-vashandisi nerubatsiro rwe software iyi.
Uri kutsvaga TeamViewer imwe nzira ine mubhadharo wekubhadhara? Kana zvirizvo, rova ​​chaiko kuSplashtop. Iyo yakavimbika iri kure desktop desktop iyo inowanikwa kwauri seese mahara pamwe neiyo yakabhadharwa vhezheni.Inotsigirwa neLinux, macOS X, Android, Windows, uye iOS zvishandiso. Kana iwe uchinge uchinetseka pamusoro penyaya dzekuchengetedza, wobva wakanganwa kunetseka kwako nekuti zvinopa kuwanda kwedatha kunyorera mazinga ekuchengetedza kwakazara kwemidziyo yako.
Nekudaro, iyo latency yakadzikira mune ino software. Zvakadaro, iyi sarudzo yakanaka kune avo vanhu vanoita yakawanda yekuteerera uye vhidhiyo kutenderera. Kurerukirwa kwekuwana uye kure kure kuzvidzora ndeimwe yeakanakisa maficha eiyi software mhinduro. Pamusoro peizvi, zviri mahara kana urikushandisa vashandisi vasina kuroora. Splashtop inobhadharisa madhora makumi matanhatu pagore.
Kana iwe uchida imwe nzira kune TeamViewer yekutarisana nezvinangwa zvekutanga sekukwidziridza kugoverwa uye kuwanikwa kwesimba pasina kukanganisa kuchengetedzwa, unofanirwa kuenda kune ino app.
LogMeIn Pro chishandiso ndiyo yakanakisa gore server iyo inosangana zvakajeka zvaunoda. Iyo inouya ne1TB yenzvimbo, kuti iwe ugone kuve nechokwadi chekuchengetedza yako ese mafaera uye kunyorera pano. Chikwata chako chinogona zvakare kukurumidza kuwana mafaera kubva kunochengeterwa kana zvichidikanwa.
Pamusoro peizvi, munhu akasununguka kudhinda zvinyorwa zvavo ari kure kune purinda yemuno, anoshanda pamwe nemafaira akasarudzika, uye otomatiki kuita IT mabasa, pamwe nezvimwe zvinonakidza maficha.
Imwe bhenefiti yekuwana iyo LogMeIn Pro ndeyekuti ine yakanyanya kuchengetedzeka, iyo yaunogona kupotsa muTimuViewer. Chikamu chako chakachengetedzwa neAES 256-bi encryption uye TLS 1.2 yekufambisa. Zvimwe kunze kweizvi, sevha inoonekwa zvakare nekukurumidza nerubatsiro rwePublic Key Infrastructure.
Sezvatakakurukura muchikamu chekutanga, rimwe rematambudziko makuru ekushandisa TeamViewer ndiko kuomarara kwayo. Asi ikozvino iwe une yakasarudzika sarudzo muchimiro cheChannel Remote Desktop. Iyi software mhinduro iri nyore kushandisa. Zvese zvaunoda kuvhura Google Chrome pakombuta yako iri kure. Iwe unobva wakwanisa kutanga kudzora uye kuongorora zvishandiso zvinowira munzvimbo dzako dzenetwork.
Kana iwe uchinetseka nezve iyo inoshanda system kumhanya, saka zvinoshamisa. Izvo hazvikanganisa kumhanya kwe chrome kushanda. Ichi chishandiso chinouya nemutengo weti uye inokupa ipfupi functionalities. Iwe uchapotsa mamwe mabasa senge vhidhiyo kufona, pasina kutaurirana, uye kugovana skrini, iyo yauinayo muMikogo. Zvakadaro, zvingave zvakanaka kuwana zvishandiso zviri kure.
6. Misangano yeWebex
Zvakanaka, Webex Misangano ndiyo yechokwadi imwe nzira kune TeamViewer sezvo iri zvakare yakanakisa webhu musangano wekushandisa. Iri igore-based application iro rakapararira pamhiri dzakasiyana siyana dzeCisco yemaseva ane akati wandei bandwidth. Kunze kwezvo, iyi software zvakare inosanganisira caching pfungwa uye back-up, ichigadzira ichi chishandiso chikuru kune vakadzoserwa uye hombe timu iyo inoda yakawanda yekuwanikwa.
Nekudaro, iyo yekutanga pasuru yeWebex inotendera iwe kuti umise webhu misangano pamwe ne100 vashanyi. Iwe unogona kugadzirisa hunhu hwevashandisi, kugovana skrini pamwe neyavo seti yemvumo.
Kunze kweizvi, iwe zvakare uchave uine password yekudzivirira uye nyore kuwana zviri kure zvishandiso, uye kusanganisa pamwe neMicrosoft maonero Asi iyi Anwendung inongokutendera iwe kumusangano nevashandisi vaviri chete panguva mune yayo yemahara vhezheni. Nekudaro, iwe unogona kufunga nezve kubhadhara iyo yakazara huwandu kuti uwane ayo ese maturusi.
7. REALVNC Batanidza
Chekupedzisira chisiri chidiki pane chinyorwa iREALVNC Unganidzo. Iyo ndeimwe yeakanakisa dzimwe nzira dzeTimuViewer maererano neseshini uye chengetedzo pane REALVNC. Izvi zvinopa zvese kuchengetedza password uye kunyorera.Iyo inoratidzira zvese zviri zviviri muoni application kupinda kubva pakombuta yako uye sevha app yakaiswa pakombuta iwe yauri kudzora.
Chinhu chakanakisa nezve software iyi ndechekuti haidi magadzirirwo e router uye imwe firewall kuti iwanikwe.Pamusoro peizvi, inowanikwa mune zvese zvakabhadharwa uye zvemahara sarudzo. Kana iwe uchida kuwana mamwe maturusi, saka unofanirwa kubhadhara mutengo mudiki wakakwira wepakati pe $ 55. Zvakare, iwe uchagashirawo akajairwa maficha senge chat uye data kuchinjisa.
Saka, ikozvino une dzimwe nzira dzakanakisisa dzeTeamViewer dzaunogona kuisa pamakomputa ako kuti uvake chinongedzo chiri kure neimwe PC yenharaunda iri kure. Idzi sarudzo dzinenge dzichizadzisa zvese zvaunoda kuti uwane makomputa ari kure.
Akanakisa Z390 Mabhodhi emamaGaming
Rongedza Error Microsoft Minecraft Remoteconnect
Akanakisa Textsheet Dzimwe nzira (2020) - Yemahara & Inobhadharwa
Best Emulators eWindows 10
mari yese iri munyika putlocker
webhusaiti kuona mafirimu emahara pasina kurodha pasi
g chinja 2 chisina kuvhurwa kuchikoro
tarisa epamhepo mafirimu emahara
www download emahara mafirimu com